Ihe ịtụnanya Tanzania Novelist nwetara Nobel Prize for Literature
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ihe ịtụnanya Tanzania Novelist nwetara Nobel Prize for Literature
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye meriri na Nobel Prize na onye edemede akụkọ Tanzania Abdulrasak Gurnah
Onye na -ede akwụkwọ akụkọ na Tanzania Abdulrasak Gurnah ebipụtala akwụkwọ akụkọ iri na ọtụtụ akụkọ mkpirikpi, ọtụtụ na -eso ndụ ndị gbara ọsọ ndụ ka ha na -ahụ maka mfu na mmerụ ahụ nke nchịkwa mba Europe mere na mpaghara Afrịka kpatara, ihe onye ode akwụkwọ merela n'onwe ya. Akpọrọ ya aha nrite Nobel maka 10 maka edemede.
Mgbe ọ nọ na mpụga, Abdulrasak Gurnah malitere ide dị ka usoro ịnagide trauma maka ịhapụ ala nna ya.
Ọ ghọrọ olu dị mkpa nke ahụmịhe na akụkọ ihe mere eme nke ọchịchị ndị Europe na mpaghara Afrịka.
Ọ bụ onye mbụ nwetara nturuugo Afrịka ka akpọrọ aha ya na Nobel Prize for Literature category for almost 20 afọ.
A mụrụ Gurnah na 1948 na Zanzibar. Mgbe a tọhapụrụ ya na Alaeze Ukwu Britain na 1963, Zanzibar gabigara ọgba aghara nke dugara na mkpagbu ndị pere mpe sitere na Arab. N'ịbụ onye otu agbụrụ ahụ ezubere iche, a manyere Gurnah ịchọ mgbaba na England mgbe ọ dị afọ iri na asatọ.
Onye minista mba ofesi Germany, Heiko Maas, wepụtara nkwupụta na Ọktọba 7, 2021, na mkpebi nke Kọmitii Nobel nyere Abdulrazak Gurnah Nrite Nobel maka Akwụkwọ. Nkwupụta ahụ gụrụ:
“Site na onye edemede Tanzania Abdulrazak Gurnah, ọ bụghị naanị na a na-asọpụrụ olu dị mkpa nke ọchịchị mgbe ọ gbasasịrị, kamakwa ọ bụkwa onye mmeri Africa mbụ na ụdị a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ. N'ime akwụkwọ akụkọ ya na obere akụkọ ya, Gurnah na -ekwu maka akụkọ gbasara ọchịchị na mmetụta ya na Afrịka, nke na -aga n'ihu na -eche onwe ha taa - gụnyere ọrụ ndị ọchịchị German mere. Ọ na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya megide ajọ mbunobi na ịkpa ókè agbụrụ ma na-adọrọ uche anyị gaa na njem afọ ofufo na-adịghị ahụkebe nke na-adịghị agwụ agwụ nke ndị na-ebuso ụwa ọzọ agha.
"Ọ ga-amasị m inye Abdulrazak Gurnah ekele m nke ukwuu maka imeri ihe nrite Nobel maka akwụkwọ-ihe nrite ya na-egosi mkpa mkparịta ụka na-agba ọkụ na nke gbasapụrụ agbasara gbasara ihe nketa nke ala anyị ka na-aga n'ihu."
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) ghọtara ihe Abdulrasak Gurnah rụzuru, onye isi oche ATB Alain St.Ange nwere ihe a ikwu:
“Anyị na Kọmitii Njem Nleta Africa na -ekele Abdulrazak Gurnah onye Tanzania na -ede akwụkwọ akụkọ maka inye ya Nrite Nobel maka 2021. O meela Afrịka mpako. Site na mmezu ya, ọ na -egosi na Afrịka nwere ike na -enwu nakwa na ụwa kwesịrị naanị ịtọghe nku onye Afrịka ọ bụla ka anyị hapụ. "
Onye isi oche nke ndị nlegharị anya njem nlegharị anya nke Afrịka na-agbasi mbọ ike ka Afrịka degharịa akụkọ nke ya ma hapụ ohere iji megharịa oku a, na-ekwu na isi USPs nke Africa ndị Afrịka nwere ike ikwughachi nke ọma.
ATB gara n'ihu na-agba mbọ ka Africa dịrị n'otu ka ọ na-akwado maka ịmalitegharị ụlọ ọrụ njem ya.
Gurnah bụ prọfesọ ugbu a onye ntoputa nke ọmụmụ Bekee na postcolonial na Mahadum Kent.